HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulNidaamka mitirka ee AGT wuxuu ku yaal Agenda Wasaaradda
09 / 01 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
wasaarada agt subway system gundeminde
Wasiir ku xigeenka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mehmet Fatih Kacır ayaa booqday Jaamacadda Ganacsiga Magaalada Istanbul, wuxuuna warbixin ka helay Arjiga Nidaamka Gaadiidka iyo Saraakiisha Xarunta Cilmi baarista. Nidaamka mitirka ee AGT wuxuu keenayaa ajendaha Wasaaradda, ayuu yidhi.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mehmet Fatih Kacır ayaa ka soo qeyb-galay kulanka lagu qabtay Jaamacadda Ganacsiga ee Istanbul, halkaas oo miiska metro AGT (darawal-darawalnimo) la saaray. Nidaamka Gaadiidka Codsiga iyo Maamulaha Xarunta Cilmi baarista Dr. Mustafa Ilıcalı, kulan degdeg ah ee waaxda gaadiidka dalka Turkiga ku siiyey warbixin ku saabsan nidaamka tareenka AGT. Faa'iidada ugu weyn ee nidaamka, taas oo muujinaysa in qaab dhismeedka degdegga ah. Dr. Ilıcalı wuxuu yiri: “Nidaamka loo yaqaan AGT metro system ee adduunka wuxuu siiyaa ku fududaato aragtida joornaalada iyadoo ay ugu wacan tahay awooda dusha sare. Waxay leedahay dhaqdhaqaaq la jaan qaada oo ay la jaanqaadi karto magaalada haatan jirta qaabkeeda lehna guntin burbursan. Gawaarida iyo gadiidka bilaashka ah. Waa nidaam qiime jaban leh oo leh khatar eber ah oo shilalka iyo tamarta dib loo cusbooneysiin karo
Wasiir kuxigeenka Kacır ayaa carabka ku adkeeyay in iskaashatada ganacsigu ay muhiim u yihiin xallinta dhibaatada gaadiidka iyo “Shaqooyin waaween waxaa laga dhisay jaamacado waaween”. Kacır wuxuu cadeeyay in ajandaha loo soo bandhigi doono shirarka wadajirka ah ee ay yeelan doonto Wasaaradda Gaadiidka iyo Warshadaha. Ku-xigeennada kulanka Dr. Abdul Halim Zaim iyo Prof. Dr. Necip Şimşek, Agaasimaha Codsiga Nidaamka Gaadiidka Codsiga iyo Xarunta Cilmi baarista Dr. Mustafa Ilıcalı, aqoonyahannada Prof. Dr. Tuncer Toprak, Dr. Gencay Karakaya, Khabiirka Xarunta Güllü Sonakalan iyo saraakiil ka tirsan kooxda AGT.itohab waa)
Qaababka Gaadiidka Magaalada ee Agagaarka Maraykanka
Tramhakaan maxaliga ah (Silkworm) wuxuu ku jiraa Agenda of All Municipalities (Sawirka Sawirka - Video)
Nidaamka mitirka darawalnimada